Izinzuzo zokuhlala endaweni yokuhlala eyunivesithi ngonyaka wokuqala | Ukwakheka nezifundo
Izinzuzo zokuhlala endaweni yokuhlala eyunivesithi ngonyaka wokuqala
UMaite Nicuesa | | Amathiphu, Izindawo zokuhlala eNyuvesi
Esinye sezinqumo noma yimuphi umfundi oqala ukufunda eyunivesithi ekude nasekhaya lakhe elijwayelekile kumele asithathe yindlela yokuhlala. I- Izindawo zokuhlala eNyuvesi Kuyindlela ejwayelekile phakathi nonyaka wokuqala, isikhathi sokuzivumelanisa nezimo ngokuya esigabeni esisha.
1 Hlangana nabangane abasha
2 Inqubo emisiwe
3 Awudingi ukupheka
5 I-ajenda yokuzilibazisa
Hlangana nabangane abasha
Njengasenyuvesi unethuba lokwenza njalo hlangana nabantu kuyathakazelisa, futhi, ngenxa yenani elikhulu labahlali bendawo yokuhlala eyunivesithi, futhi ungenza abangane abasha. Futhi, unethuba lokuhlangana nabantu abavela ezingxenyeni ezahlukahlukene zomhlaba.
Uma ungathanda ukuhlangana nabantu abasha ukuthuthela efulethini okwabelwana ngalo ngonyaka wesibili, lapho-ke indawo yokuhlala eyunivesithi ikunikeza ithuba yenza izixhumanisi ezintsha ngonyaka wokuqala.
Into ethakazelisa kakhulu ngokuhlala kwabafundi ukuthi uzohlangana nabanye abantu abasesimweni sempilo esifana nesakho. Ngakho-ke, lokhu futhi kunikeza nokukhuthazeka okwengeziwe ezifundweni ngenxa yokuqiniswa okuhle kwamandla eqembu. Uzophinde uhlangane nabafundi abavela emikhakheni ehluke kakhulu. Lokhu okuhlangenwe nakho kucebisa kakhulu.
Uma ufuna indawo ekunika yona schedule isimiso Ukuze uhlele i-ajenda yakho, lapho-ke, indawo yokuhlala eyunivesithi ikunikeza le ndawo yenhlalakahle eyenziwe ngokukhethekile ukukhuthaza umfundi ukuthi agxile emisebenzini yabo yokufunda.
Ngaphezu kwalokho, lapho uhlala khona eyunivesithi ungathola ukulinganisela okuphelele kwemizwa ohambisana nayo kepha unesikhala sakho. Lokho wukuthi, awusoze wazizwa uwedwa ngoba noma nini lapho udinga usizo ungaxhumana nabasebenzi abagunyaziwe endaweni yokuhlala.
Uma ungenalo ulwazi lokupheka amamenyu ahlukahlukene, ihholo lokuhlala lineenkonzo yasekamelweni lokudlela. Futhi ngokwazi ukuya nsuku zonke ukujabulela imenyu, unethuba lokuthi ungazihluphi ngokulungisa izitsha. Akungabazeki a ukudla okunempilo kubalulekile ukugcina ukusebenza okuphelele ezifundweni. Ngalesi sizathu, ukuba nesimiso esihle sokudla kuvuna impilo yakho, ukukhula kwakho ngokomzwelo nakwezemfundo.
Lapho uhlala khona umfundi unganikela ngesikhathi sakho ikakhulu ekutadisheni ngoba imisebenzi yokuhlanza yezindawo ezijwayelekile yenziwa ngabasebenzi abathile.
Izindawo zokuhlala zabafundi zivame ukutholakala ezindaweni eziseduze nedolobha laseyunivesithi. Ngakho-ke, lokhu kusondela futhi kukunikeza ukonga isikhathi lapho usohambweni. Ngakho-ke, lokhu kusondela kukunika ithuba lokunethezeka. Lokhu kufaka phakathi ukonga kwezomnotho ngokuthuthwa emadolobheni njengoba ukwazi ukuya ezifundweni.
Izindawo zokuhlala zabafundi zine-ajenda yabo yokuzilibazisa nemisebenzi. Ngakho-ke, ungajoyina lezo zinhlelo ozithandayo. Isigaba senyuvesi asigcini ngokufeza izinhloso zezifundo kepha yisigaba sokukhula komuntu.
Ngaphandle kokungabaza, akuyona yonke into enenzuzo. Enye yezingqinamba ezinkulu kwamanye amahholo okuhlala intengo yenyanga. Futhi, kufanele kubekwe esimisweni esithile ngempelasonto.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukwakheka nezifundo » Izaziso » Amathiphu » Izinzuzo zokuhlala endaweni yokuhlala eyunivesithi ngonyaka wokuqala
Ungaba kanjani namakhono angcono ezifundo
Izinzuzo ezinhlanu zokufunda isiNgisi esikoleni solimi